Mmanụ dị mkpa maka ihe mgbu azụ - mmanụ dị mkpa n'ùkwù | AromaEasy
Otu nnyocha na-egosi na ihe dị ka pasent 80 nke ndị America na-enwe ahụ mgbu n'oge ụfọdụ n'oge ndụ ha. Dabere n’otú o si sie ike, ihe mgbu na ihe mgbu ya na-eso ya nwere ike ịbụ nke a na-apụghị ịnagide nke na ọ nwere ike isiri gị ike ịrụ ọrụ, oge ọrụ, na ọbụna mmegharị kwa ụbọchị.
Nnukwu (obere oge) mgbu azụ nwere ike ịchọ naanị izu ike ụra na ọgwụ mgbu. Ọrịa na-adịghị ala ala (na-adịte aka), mgbu, chọrọ mgbanwe kwesịrị ekwesị n'ụzọ ndụ. Otu ụzọ isi gbanwee ndụ gị bụ iji mmanụ dị mkpa.
E si na epupụta, mkpụrụ, ifuru, mkpụrụ osisi, na stem nke ụfọdụ osisi, mmanụ dị mkpa na-eji aromatherapy ma ọ bụ diluted na etinyere na topically. Nchọpụta ahụike egosiwo na ụfọdụ mmanụ a nwere ike belata ọtụtụ ọrịa na ahụ, dị ka azụ mgbu.
Ihe kacha mma dị mkpa maka mgbu azụ
Site na nhọrọ nhọrọ mmanụ niile dị mkpa, ọ nwere ike iju gị anya ịmata ndị nwere ike inyere aka na mgbu gị na azụ. Mmanụ ndị a nwere ike inyere gị aka.
1. Mpekere pepemint
O nwere ike ịbụ onye a ma ama maka menthol undertones, pepemint dị mkpa mmanụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ike eke analgesics. Mmanụ pepemint dị ọcha nwere ma ọ dịkarịa ala pasent 44 nke ihe menthol dị ọcha, nke ejirila dị ka ihe na-egbu mgbu anụ ahụ maka ọnọdụ dị iche iche.
2. Uhie oyi
Wintergreen mkpa mmanụ nwere analgesic Njirimara akin ka pepemint. Kpọmkwem, wintergreen nwere methyl salicylate, nke yiri aspirin. Ọ bụrụ na ị na-a takingụbu ọgwụ ndị ọzọ, kpọtụrụ dọkịta gị tupu ị na-eji wintergreen.
3. Mmanụ Lemongrass
Mmanụ lemon a mụbara ya ebe niile maka akụrụngwa antifungal ya. Otu nyocha nyochakwara ihe onwunwe ya dị egwu. Mbelata nke mbufụt nwere ike ime ka ihe mgbu belata.
4. mmanụ lavender
Dịka otu n'ime mmanụ ndị a na-amakarị na ewu ewu, lavender mmanụ dị mkpa na-arụ ọrụ dịka mmanụ dị iche iche maka ọtụtụ ọrịa. Dabere na otu nyocha ahụike, mmanụ lavender nwere ike inye aka belata isi ọwụwa na mgbu mgbu. Uru ndị dị otú ahụ nwere ike ịfefe na mgbu na azụ.
5. Eucalyptus mmanụ
Amara maka ike ya na-egbochi mkpali na mgbochi nje, eucalyptus mmanụ dị mkpa nwere ike ịnwe mmetụta analgesic na akwara na nkwonkwo. Nnyocha nyocha ahụike 2015 chọpụtara na mmanụ ahụ ekwela nkwa n'ịgwọ ọrịa dịka ogbu na nkwonkwo, flu, na ọnya.
6. Mmanụ Chamomile
Ọ bụ ezie na a ghọtara chamomile nke ọma maka atụmatụ izu ike ya (ihe kpatara na ọtụtụ ndị na-a drinkụ tii chamomile mgbe ha na-arịa ọrịa), chamomile mkpa mmanụ nwere ihe ndị ọzọ eburu n'uche. Ndị a gụnyere iwelata mkpịsị akwara na mkpokọta mbufụt. Lezie anya mgbe ị na-eji chamomile eme ihe ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nfụkasị nke ragweed, dịka osisi sitere na otu ezinụlọ.
7. Mmanụ Rosemary
Rosemary abughi nani akwukwo nri. Mmanụ dị mkpa amịpụtara si Rosemary egosila na ọ bara uru ahụike. Ndị a na-agụnye iweda ihe mgbu site na nkwarụ na nsogbu ịhụ nsọ. Mmetụta ndị dị otú ahụ na-egbochi mkpali na mgbu nwere ike inye aka maka mgbu azụ.
8. Mmanụ sandalwood
Mmanụ sandalwood mejupụtara mgbochi mkpali Njirimara. A mụọla nsonaazụ ndị a maka nsonaazụ ha yiri nke ọgwụ ọgwụ na-enweghị isi. Iwelata ọzịza na azụ na mmanụ sandalwood nwere ike belata mgbakasị ahụ, kwa.
Etu esi eji mmanụ dị mkpa maka azụ mgbu
Chọta mmanụ ndị dị mkpa kwesịrị ekwesị maka ọgwụgwọ mgbu azụ gị bụ mmalite. Ọzọ, ikwesiri ịghọta etu esi eji ha eme ihe ọfụma ka ị ghara ịrịa ọnya ma ọ bụ nsonaazụ ndị ọzọ. Enwere ike ịmịnye mmanụ dị mkpa na aromatherapy ma ọ bụ gbanye ya ma tinye ya n'azụ gị ma ọ bụ jiri ya saa ahụ.
Jiri mmanu di nkpa na aru
Enwere ike iji mmanụ dị mkpa mee ihe oge niile ma ọ bụ tụgharịa n'azụ gị; n'ụzọ ọ bụla, ị ga-ebu ụzọ tụgharịa ha.
Gwakọta 6 tụlee mmanụ ị họọrọ na teaspoons isii nke mmanụ na-eweta mmanụ, dị ka jojoba ma ọ bụ mmanụ oliv. Mee ule nkedo nke mmanụ a gwara gị na obere akụkụ nke anụ ahụ. Ọ bụrụ na enweghị mgbakasị na-amalite mgbe awa 24 gachara, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ị nwere ike iji mmanu nwere mmanu na mpaghara ka ukwuu nke anụ ahụ, dịka azụ gị.
Tinye ngwakọta gị agwakọtara na azụ na ịhịa aka nwayọ iji bulie absorption. Gbalịa hichaa aka gị tupu imetụ ihu gị aka, ebe ị chọghị ime ka anya gị ka njọ. Ọzọkwa, hụ na mmanụ anaghị abanye n'ọnụ gị.
Kuru ha ume na ụbọchị
Ikuru ume mmanụ dị mkpa bụ ụzọ ọzọ maka ọgwụgwọ mgbu na mbufụt. Tinye ụfọdụ tụlee nke mmanụ dị mkpa maka mmiri na mmiri na-ekesa ma hapụ ya ka ọ na-arụ ọrụ n'ọfịs ma ọ bụ n'ụlọ gị. Nwere ike ịgbakwunye mmanụ ma ọ bụ mmiri na-ekesa ka ọ dị mkpa ma na-agba ya ọsọ ụbọchị niile.
Were ihe dị mkpa ịsa ahụ batara
Maka mgbu azụ, ịsa ahụ na-ekpo ọkụ na izu ike nwere ike inye aka belata ihe mgbu na mbufụt. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbakwunye mmanụ dị mkpa na mmiri ịsa ahụ, na-agbakwunye tụlee iri na mmiri pọmpụ. Lezie anya ịbanye na ịsa ahụ ma ọ bụrụ na mmanụ eme ka tub ahụ na-amị amị.
Mgbe ejiri ya mee ihe n'okpuru nduzi, mmanụ ndị dị mkpa agaghị ebute nsonaazụ. Akpụkpọ anụ na mbufụt nwere ike ime na-enweghị mmịcha kwesịrị ekwesị ma ọ bụ nyocha ọhụụ tupu oge eruo.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị dị ime, na-enye nwa ara, ma ọ bụ nwee ọnọdụ ahụike ọ bụla. Rịba ama na aromatherapy nwekwara ike inwe mmetụta na anụ ụlọ, ụmụaka, na ndị ọzọ nọ n'ógbè ahụ. Ya mere, ha lekwasịrị anya, mmanụ ndị dị mkpa dị ike. N'ihi ya, gbaa mbọ ghara itinye ha n'ime, ma ọ bụ tinye ha n'akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ ebe dị gị nhịahụ dịka anya na imi.
Inwetakwu Nnukwu ọdịnaya
Soro AromaEasy na [Instagram]
Dị ka anyị na [Facebook]
4 echiche na “Mmanụ dị mkpa maka mgbu azụ"
Ndụ Moksha ekwu, sị:
Enweghị m ike gwụ m mgbe m na-agụ isiokwu gị n'ihi na, ha na-adịwanye ụtọ site na mbido ruo mgbe ọgwụgwụ.
November 25, 2020 na 5: 58 am
Galina ekwu, sị:
Ного често употребявам етерични масла и ми беше много полезна публикацията .gha.
April 30, 2021 na 7: 36 pm
ọkpọ gold ekwu, sị:
Daalụ! Blog a na-enye anyị ozi bara uru
January 22, 2021 na 11: 01 pm
Daalụ! Nke a blog na-enye anyị ihe ọmụma bara uru, NICE